Velona indray ny adihevitra manoloana ny hoavin’ny rano voaaro ao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2018 5:31 GMT
Riandranon'i Agua Azul (ranomanga), Meksiko. Saripikan'i Donar Reiskoffer. Navoaka mifanaraka amin'ny lisansa Creative Commons (Attribution 3.0 Unported)
Nandritra ny andro nialoha ny fifidianana filoham-pirenena tao Meksika, lasa niady hevitra amin'ny hoavin'ny (fampiasana) rano indray ny firenena rehefa nisy vaovao lahatsoratra iray nampitandrina ny amin'ny fanomezana hoan'ny miahy tena ny tahirindranom-pirenena. Araka ny lahatsoratra, nanararaotra ny fahavarianan'ny olona mijery ny lalaon'i Meksika voalohany amin'ny Amboara Manerantany 2018 no nanaovana ilay hetsika politika.
Taorian'ny namoahan'ny tranonkalam-baovao an-tserasera Sin Embargo ny tantara, namoaka izany indray mandeha ihany koa ny fantsona fampitam-baovaom-pirenena ampolony. Izany dia taorian'ny fanasoniavana ny didy hitsivolana navoakan'ny filoha tamin'ny 5 jona #DíaMundialDelMedioAmbiente (Andron'ny Tontolo Iainana Manerantany) izay manova ny sata ara-pitsarana ireo tahirin-drano arovana.
Mitohy ny adihevitra an-tserasera mampisara-kevitra amin'ny fanarahana ny tenirohy [farangonteny] #PrivatizacionAgua (privatizasionan'ny rano) sy #ReservasDeAgua (tahirindrano). Ankilany, milaza ny mpisera fa ‘vaovao faikany’ io satria tsy nosoniavina tamin'ny andro nivoahan'ny tati-baovao milaza ny fisian'izany fanasoniavana izany ny didy hitsivolana (tamin'ny andro nilalaovan'i Meksika tamin'ny Mondialy). Navoitran'izy ireo ihany koa fa tsy midika ho fanomezana ho an'ny miahy tena (privatizasiona) mihitsy ireo didy hitsivolana ireo. Andaniny, milaza ireo manontany ny fisian'ny hetsika fa azo atao amin'ny alalan'ilay didy hitsivolana ny manao fitrandrahana tsy araka ny tokony ho izy, izay mety hampisy ny fahasimbana ara-tontolo iainana sy ara-piarahamonina bebe kokoa:
Ry tafika nomerika, ankoatra ny tranonkalam-baovao Regeneración sy Sin Embargo, dia misy ireo tranonkalam-baovao namoaka (ary mbola mamoaka) fa noprivatizena ny rano raha mbola nijery ny lalao nihaonan'i Meksika sy Alemaina isika. Tsy marina izany. Ezahan'io vaovao faikany io ny mampiasa ny hatezerantsika mba ho fanoitra hifidianana an'ilay “efa fantatrareo”.
Namoaka fanambaràna ny Sekretaria misahana ny tontolo iainana sy ny loharanon-karena voajanahary eo ambany fahefan'ny Vaomiera Nasionalin'ny Rano fa ny didy hitsivolana voalaza dia hatao hanome rano azon'ny olombelona atelina sy mba hampifanarahana ny fikojana ny tontolo iainana amin'ny fitsipika (fanafatrafarana) iraisampirenena. Mandritra izany fotoana izany ny World Wide Fund (WWF) for Nature manondro ny fanapahan-kevitra hanova ny “faritra nakatona” ho “tahirin-[javaboary]” ho mety sy “manatantara“.
Privatizasionan'ny rano? Mifanohitra amin'izany: rano ampy, ho an'ny tontolo iainana sy ho an'ny vahoaka. Ity ny hevitray manoloana ny didy hitsivolana amin'ny vala tahirin-javaboary Agua.https://t.co/MCzaNv6Mba
Ao anatin'ny sioka: Momba ny tahirin-drano. Ny hevitry ny WWF manoloana ny tahirin-drano. Tsy maneho velively fanomezana ny rano ho an'ny miahy tena ny Tahirin-drano, na hoe famonoana ny zo hahazo rano misy amin'izao fotoana.
Nanoratra ny Fisantaran'andraikitry ny olompirenena amin'ny lalàna ankapoben'ny rano ny tambajotra iray mampiray ny tanànakely, vondrom-piarahamonina, ary ny fikambanana mpiaro ny rano mivondrona amin'ny anarana Rano ho an'ny Rehetra, nanomboka fanangonan-tsonia an-tserasera mba hanovana ny didin'ny filoha, ary vao nanatontosa valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny Oniversite mizakatenan'i Meksika momba ity raharaha ity.
Ny famakiana teny no mahatonga anao hahatsapa fa tsy fahakanosana miseho ho mpikatroka ihany ny privatizasionan'ny rano.
Inona avy no ahiana?
Ao anatin'ny karazam-pilazan-toetra “tsara dia tsara” ka hatramin'ny “mahatsiravina”, sy ny fahanginan'ny mpiantsehatra lehibe tahaka ny Fiarahan'ny fikambanana meksikana ho amin'ny fiarovana ny zon'olombelona hahazo rano sy ny Foibe meksikana misahana ny lalànan'ny tontolo iainana, niezaka nitady lahatahiry (andron-drakitra na antontan-kevitra) ny fampahalalam-baovao isan-karazany hampazava raha mampidi-doza ny zon'olombelona hahazo rano sy ny rohivoary ilay didy hitsivolana na tsia. Ny gazety El País nahazo ny hevitra avy amin'ny mpampianatra ambony (akademika) fito, ka ny sasany amin'ireo nampiroborobo ny fanitsiana ny andininy faha-4 amin'ny lalampanorenana natao tamin'ny taona 2012 izay manaiky ny zon'olombelona hahazo rano:
Tsy zava-baovao ny lohahevitry ny #ReservaDeAguas (Tahirin-drano). Ny didy hitsivolana dia fitohizan'ny fanazavana efa nataon'ny OSC sy ny @CNDH, nangonina tao amin'ny famotopotorana iray nataon'ny @PdPagina. Indreto ny torohay sasantsasany ilaina hahatakarana ny zavamisy manodidina ny #PrivatizacionDelAgua privatizasionan'ny rano https://t.co/JA4UXS7xd9
Ny lohatenin'ny lahatsoratra dia mivaky hoe: ahiana ny 55 isanjaton'ny rano manerana ny firenena noho ny fanesorana ny fanakatonana.
Noho ny tsy fahampian'ny fangaraharana eo amin'ny votoaty sy ny halehiben'ny didy hitsivolana navoaka vao haingana, maro amin'ireo mpisera aterineto mandray anjara amin'ny adihevitra no manontany ireo tsy manaraka ity raharaha ity mba hijery indray ny loharanom-baovao rehetra sy ny tokotany manodidina ireo adihevitra isan-karazany. Ny fiadiana fo voalohany dia ny midify mamintina ity raharaha ity no resa-pifidianana, fa mba ekena fa tokony hampidirina ao anatin'ny adihevitra avokoa ireo singa mahatonga ny fifandirana mifandraika amin'ny mahaloharanon-karena ny rano ao Meksika. Rehefa ao an-tsaina izany, dia niditra tao amin'ny sehatra an-tseraserany ny mpisera Twitter hanazava amin'ny alalan'ny randram-baovaony ny fahasarotana sasantsasany amin'ny adihevitra.
Efa lohahevitra nandeha tao Meksika notohizan'ny governemanta ankehitriny ny fakana ny rano hotrandrahan'ny miahy tena. Hita amin'ny raharaha #LeyKorenfeld tamin'ny taona 2015 sy ny raharaha #LeyPichardo tamin'ny taona 2018 ny ohatra momba izany.
Amin'ny zavamisy ankehitriny, hanana ny lanjany lehibe ny fanatrarana famaritana ara-pitsarana ny “soa iombonana”, sy ny toerana sy ny fahavononan'ny 55 isanjaton'ny tahirindrano ao anatin'ny sisintany meksikana. Ny fanahiana voalohany avy amin'ireo miampanga ireo didy hitsivolana ireo dia mitady hampiasa ny tombondahiny amin'ny maha-(fahefana) mpanatanteraka ny governemanta amin'izay tsy mety tanterahina amin'ny alalan'ny fampandalovana ny lalàna any amin'ny fahefana mpanao lalàna noho ny fitsipahana mieli-patrana avy amin'ny vahoaka.